Uyilo lwangaphakathi lwezindlu zakudala Izakhiwo zezindlu zangaphakathi ixabiso lezindlu zakwaConstanta Bucharest - Nobili I-design yangaphakathi, i-studio, i-designer, i-designer, iinkampani, ukuyila, amaxabiso
Isakhiwo sangaphakathi sakhiwo izindlu zee-villas zindawo zokuhamba
ukulungiswa kwangaphakathi kwamaxabiso	iinkampani zangaphakathi zoyilo kwi-bucuresti	uyilo lwesitayela sasekhaya	lwangaphakathi kwintengo yeklasi yangoku	idizayini yasekhaya yaseklasini	indlu yangaphakathi yendawo yokunethezeka yendlu yokuhlala	uyilo lwangaphakathi 3d	lwangaphakathi lwangaphakathi lweklasi	izindlu zangaphakathi nangaphandle	indlu kunye noyilo lwangaphakathi	iiprojekthi zendlu yangaphakathi nangaphandle	ukuyila ngaphakathi	ixabiso lokwakheka ngaphakathi	ixabiso lokwakha intengo	iinkampani zangaphakathi zenkcazo zithengisa amaxabiso	iinkqubo zangaphakathi zenkampani i-brasov	iinkampani zangaphakathi zoyilo prahova
Iiprojekthi ezivela kwi-3D yangaphakathi kwipotfoliyo yangaphakathi yezindlu, ii-villas, izindlu ezenziwe ngeklasi, i-eclectic, isitayela samanje okanye iMedithera eyenziwe kuzo zonke iindawo zelizwe. Sinikeza iinkonzo zangaphakathi kwii-turnkey izindlu ezineendlela zokuhambisa zonke izinto ezifakwe kwiprojekthi yoyilo lwangaphakathi.
Izakhiwo zangaphakathi zokuqulunqa izindlu iBucharest - Inkampani yangaphakathi yokuyila iConstanta amanani
Ikhasi le-1 kwi-4
Indlu yendlu yokuhlobisa indlu yangaphakathi
Ukulandela ukuphunyezwa kwengcamango ukuyila ngaphakathi kunye nekampani esinika abaxhasi bethu ithuba lokuthenga izinto eziyimfuneko kwinkqubo yoyilo lwangaphakathi. Ukubamba indawo top ukususela 2008, inkampani yethu ligxininisa kuyilo kunye noyilo elingaphakathi unephothifoliyo lweeprojekthi wangaphakathi abagqibe ngempumelelo zombini izindlu mihla zokuhlala kunye nezindlu ezindala e Galati, Braila, Tulcea, Calarasi, Craiova, Giurgiu, Buzau, Bacau, Iasi, Suceava, ngokunjalo nemihlaba zorhwebo (ihotele, ihostele, iziganeko salon, iindawo zokutyela, nemivalo, cafes, ubuhle salon igcina beauty) e Constanta, Bucharest, Brasov, Ploiesti, Prahova. Iingcali zethu kwi-design yangaphakathi zilungelelanisa imfuno nganye, kwaye kuxhomekeke kwibhajethi echanekileyo, khetha iileyiti zekheram kunye nesitya sokuhlamba kunye nekhitshi, igumbi lokuhlala kunye nefenitshala yokulala, izidonga zodonga, izixhobo kunye nokugqiba, izixhobo zokukhanyisa kunye nezinye izinto ezihlobisa. Amacandi e-classic okanye ama-chandeliers anamhlanje angabandakanywa ngendlela enomdla ngaphakathi kwindlu kwinkqubo yoyilo lwangaphakathi. Khetha izinto zokunethezeka ezivela kwimveliso edume kakhulu e-Itali, eJamani, eSpain kwixabiso lovelisi kunye neengcali ezivela kuyo Nobili Design Interior ngubani oza kukunika ingcebiso ngeengcali kwento nganye.
Iiprojekthi zeeprojekthi zeeprojekthi zakhiwo zangaphakathi .